कसरी वैक्यूम क्लीनर काम? - चीन शेडोंग राम्रो मोटर
नम्र भ्याकुम क्लिनर आज प्रयोग handiest सफाई घरेलू उपकरण को एक हो। यसको सरल अझै प्रभावकारी डिजाइन धूलो र हात द्वारा सतहहरु बन्द अन्य साना कणहरु सफा गर्न भइरहेको संग दूर गरेको र थप कुशल र एकदम तीव्र काम मा सफाई घर गरिएका छ। चूषण तर केही उपयोग, निर्वात निपटान लागि टाढा माटो र पसलहरु यो whisks।
त्यसैले यी घरेलू नायक कसरी काम गर्छ?
को भ्याकुम क्लिनर मलबे अप चूसना गर्न सक्नुहुन्छ पराल जस्तै यो विचार कसरी छ व्याख्या गर्न सरल तरिका। वरपरको वातावरण भन्दा कम छ कि एक दबाव: तपाईं एक पराल मार्फत पेय को एक घूंट लिन गर्दा sucking को कार्य पराल भित्र नकारात्मक हावा दबाव सिर्जना गर्छ। बस जहाँ spaceship गरेको hull मा एक उल्लंघन ठाउँ मा मान्छे बेकारी ठाउँ, फिलिम, जस्तो, एक भ्याकुम क्लिनर यसलाई मा हावा को एक प्रवाह गराउँछ जो नकारात्मक भित्र, दबाव सिर्जना गर्छ।
र यो मा पुगियो कुनै पनि साना कणहरु - - यो भ्याकुम क्लिनर हावा मा चूसने, एक प्रशंसक spins एउटा बिजुली मोटर प्रयोग र यसलाई नकारात्मक दबाव सिर्जना गर्न, अन्य पक्ष धक्का, एक झोला वा डिब्बा मा। तपाईंले केही सेकेन्ड पछि यो तपाईं मात्र एक सीमित ठाउँ मा धेरै हावा बल गर्न सक्नुहुन्छ देखि, काम रोक्न भनेर त लाग्छ सक्छ। यो समाधान गर्न, निर्वात मोटर सामान्यतया कार्य जारी राख्न अनुमति दिने, हावा खन्याउँछ भन्ने अन्य पक्ष बाहिर एउटा निकास पोर्ट छ।
हावा, तर, बस पास गर्दैन र प्राप्त बाहिर अन्य पक्ष निकालेको। यो निर्वात प्रयोग मानिसहरूलाई धेरै हानिकारक हुनेछ। किन? खैर, एक निर्वात अप उठयो कि माटो र मैला माथि, यो पनि आँखा गर्न लगभग अदृश्य हुनुहुन्छ भनेर धेरै राम्रो कणहरु सङ्कलन। तिनीहरूले ठूलो पर्याप्त परिमाणमा inhaled भने, तिनीहरूले फोक्सोमा गर्न क्षति हुन सक्छ। पछि यी कणहरु को सबै झोला वा डिब्बा द्वारा फन्दामा गरिन्छ, भ्याकुम क्लिनर कम्तिमा एक असल फिल्टर मार्फत हावा बित्दै र अक्सर एक HEPA (उच्च क्षमता Particulate गिरफ्तार) फिल्टर धूलो लगभग सबै हटाउन। मात्र अब फेरि प्रेरणाबाट गर्न सुरक्षित हावा छ।
a vacuum cleaner of The power just not its motor of the power, but also the intake port of the size, that up the dirt sucks the part by determined is। को सेवन को सानो आकार, अधिक चूषण शक्ति एक साघुँरो खण्डमा मार्फत हावा को नै रकम squeezing रूपमा हावा सार्न पर्छ भनेर छिटो अर्थ, उत्पन्न भएको छ। यो संकीर्ण, साना प्रवेश बंदरगाहों संग भ्याकुम क्लिनर संलग्नहरू ठूलो एक भन्दा धेरै उच्च चूषण गरेको जस्तो देखिन्छ कि कारण छ।
त्यहाँ भ्याकुम क्लिनर विभिन्न प्रकार हो, तर ती सबै, नकारात्मक दबाब सिर्जना एक प्रशंसक प्रयोग गरेर चूसा-अप माटो फँसाने निकास हावा सफाई र त्यसपछि यसलाई जारी एउटै सिद्धान्त मा काम। संसारले तिनीहरूलाई बिना धेरै dirtier ठाउँ हुनेछ।